सबैभन्दा ठूलो बचतको साथ १० प्रिस्क्रिप्शन कुपनहरू - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय स्वास्थ्य समाचार औषधि जानकारी खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार प्रेस कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण
मुख्य >> कम्पनी >> एकलकेयर प्रयोगकर्ताहरूले यी १० औषधिहरूमा सबैभन्दा ठूलो बचत देख्दछन्
एकलकेयर प्रयोगकर्ताहरूले यी १० औषधिहरूमा सबैभन्दा ठूलो बचत देख्दछन्
औसतमा, अमेरिकीहरू प्रति वर्ष प्रिस्क्रिप्शन ड्रगमा अधिक खर्च गर्छन् संसारमा कहीं पनि । कारणहरू असंख्य छन् नियमको अभाव , पेटन्ट संरक्षण, आपूर्ति श्रृंखला मा मूल्य वृद्धि, र मूल्य निर्धारण वरिपरि स्पष्टताको अभाव। जब औसत उपभोक्ताले थाहा पाउँदैन कि उच्च मूल्यको कारण के हो, वा त्यो मूल्य तुलना गर्न सम्भव छ, सबैभन्दा कम लागत पाउन गाह्रो छ।
प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्सका लागि मूल्य पारदर्शिता अमेरिकीहरूलाई उनीहरूको औषधि वहन गर्न संघर्ष गरिरहेको अत्यावश्यक औजार हो, सिंगलकेयरमा फार्मूला संचालनका उपाध्यक्ष, फर्म डीडी, शेली गान्धी भन्छन्। धेरैले महसुस गर्दैनन् कि उनीहरूले औषधिहरूमा सयौं डलर बचाउन सक्छन् प्रिस्क्रिप्शन डिस्काउंट कार्ड प्रयोग गरेर र सबै भन्दा राम्रो मूल्यहरूको लागि शपिंग गरेर।
बिभिन्न फार्मेसीहरूले प्राय: एउटै प्रिस्क्रिप्शन बिभिन्न मुल्यहरूमा भरिन्छ। एकलकेयरको साथ प्रिस्क्रिप्शन छुट कार्ड , तपाईं स्थानीय फार्मेसी तुलना र आफ्नो बचत अधिकतम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा हाम्रोमा तपाईको पर्चेको लागि खोजी गर्नु हो वेबसाइट वा प्रयोग गर्दै हाम्रो अनुप्रयोग । सिंगलकेयरको प्रिस्क्रिप्शन छुटले तपाईंलाई 80०% जति बचाउन सक्छ।
एकलकेयरको मूल्य पारदर्शीता चार्टले तपाईंलाई नगद मूल्यको तुलना गत वर्षको लागि एकलकेयर बचतसँग गर्दछ, रम्जी याकुब, फर्म.डी, एकलकेयर प्रमुख फार्मेसी अधिकारी भन्छन्। यदि यो तपाईंको बीमा प्रतिलिपि भन्दा कम छ भने, तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं पैसा बचत गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं कुपनलाई आफैंमा पाठ पठाउन सक्नुहुनेछ, यसलाई तुरुन्त प्रिन्ट गर्नुहोस्, वा यसलाई तपाईंको डिजिटल वालेटमा थप्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, फार्मेसी काउन्टरमा तपाईंको एकलकेयर कुपन ल्याउनुहोस्।
तपाईंको औषधिहरूको लागि तपाईंको फार्मेसीको नगद मूल्यको लागि समाधान नगर्नुहोस्! एकलकेयरको प्रिस्क्रिप्शन कूपनले 10,000 भन्दा बढी प्रिस्क्रिप्सन ड्रग्समा वास्तविक-समय बचत प्रदान गर्दछ। यहाँ 10 लोकप्रिय ड्रग्सहरू छन् सिंगलकेयर प्रयोगकर्ताहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो बचतको साथ।
औषधि एकलकेयर प्रयोगकर्ताहरू द्वारा सुरक्षित गरिएको प्रतिशत कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Lamotrigine ER % १% कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
सलिसिलिक एसिड % 88% कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
ड्याप्सोन % 87% कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
डिफेनहाइड्रामिन % 86% कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Modafinil % 84% कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
अनास्ट्रोजोल %%% कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
रिपग्लिनाइड % 75% कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
एनोक्सापेरिन सोडियम % 74% कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
क्लोनिडाइन % 73% कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
यूरिया % 73% कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
*जून २०२० देखि CVS बिक्री डेटामा आधारित प्रतिशत। बचत प्रतिशत खुद्रा फार्मेसी द्वारा भिन्न छ र परिवर्तन हुन सक्छ।
प्रतिशत बचत गरियो:% १%
Lamotrigine ER , जेनेरिकका लागि Lamictal , एक एन्टिन्कोल्ल्सेन्ट हो जुन बच्चाहरू र वयस्कहरूमा मिर्गी रोगको दौरा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो द्विध्रुवीय विकारको उपचार गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। जे होस् यो औषधि जेनेरिक छ, मुख्य, राष्ट्रव्यापी फार्मेसीमा लामोट्रिगेन ईआरको नियमित नगद मूल्य $ 500 सम्म हुन सक्छ। एकलकेयर कार्ड प्रयोगकर्ताहरूका लागि यो $ 50 भन्दा कम हुन सक्छ।
२. सालिसिलिक एसिड
प्रतिशत बचत गरियो:% 88%
सलिसिलिक एसिड एक्ने सहित छालाको अवस्थाको विस्तृत श्रृंखलामा उपचार गर्न प्रयोग गरिएको सामयिक औषधि हो। जबकि तपाईं काउन्टर मा कम शक्ति सलिसिलिक एसिड किन्न सक्नुहुन्छ, केहि सर्तहरूमा पर्चेको बल चाहिन्छ । फार्मेसी काउन्टरमा, सलिसिलिक एसिडको पर्चा-शक्ति खुराक महँगो पर्न सक्छ - तर एकलकेयर बचतको साथ भने होइन!
प्रतिशत बचत गरियो:% 87%
ड्याप्सोन गम्भीर एक्ने जस्तो छालाको अवस्थाको उपचार गर्नका लागि सिफारिश गरिएको एक एन्टिबायोटिक र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी Rx हो। यो जेनेरिक औषधि जेल वा ट्याब्लेटमा उपलब्ध छ र विभिन्न डोजमा उपलब्ध छ। जे होस् ड्यापसोन जेनेरिक छ, एकल भरणको लागि नगद मूल्य सिंगलकेयर कार्ड बिना अझै पनि .०० भन्दा बढी हुन सक्छ।
प्रतिशत बचत गरियो:% 86%
डिफेनहाइड्रामिन , प्राय: यसको ब्रान्ड नामले चिनिन्छ बेनाड्रिल , एक antihistamine छ। यदि तपाईं आफ्नो बिरालामा एलर्जी प्रतिक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ, वा केवल हावामा परागकण, यसले छींकने, खुजली, पित्ती, वा अन्य एलर्जी लक्षणहरूबाट राहत प्रदान गर्न सक्छ।धेरै व्यक्तिहरू सचेत छैनन् कि यस किसिमका अति-काउन्टर उत्पादनहरूलाई छुटमा खरीद गर्न सकिन्छ। यो प्रिस्क्रिप्शनको लागि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई फोन कल मात्र लिन्छ।एकलकेयर कूपनको साथ, तपाईं नगद मूल्यमा 86 86% सम्म बचत गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि एलर्जीहरू पूरै मौसम last वा बढी लामो समयसम्म रहन सक्दछ, यदि एलर्जेन वर्षभरि उपस्थित छ, ती बचतहरूले दीर्घ-अवधिमा थप्न सक्दछन्।
प्रतिशत बचत गरियो:% 84%
Modafinil एक उत्तेजक हो जुन पुरानो निद्रा सर्तहरू जस्तो कि नारकोलेप्सी र स्लीप एपनिया व्यवहार गर्दछ। Modafinil अक्सर को लागी एक सामान्य को रूप मा निर्धारित गरीएको छ Provigil र यो एक हो नियन्त्रित पदार्थ । एकलकेयर छुट कार्ड प्रयोग गर्नेहरूले 84 84% सम्म बचत गर्न सक्दछन्, र धेरैले फार्मेसी काउन्टरमा नियमित नगद मूल्य भन्दा सयौं डलर कम तिर्दछन्।
प्रतिशत बचत गरियो:%%%
अनास्ट्रोजोल , जेनेरिक एरमिडेक्स , एक गोली हो जुन रजोनिवृत्तिमा पुगेका महिलाहरूमा स्तन क्यान्सरको उपचार गर्नको लागि अन्य उपचारहरू (शल्यक्रिया र विकिरण जस्ता) सँगसँगै प्रयोग गरिन्छ। यसले शरीरमा ईस्ट्रोजेन स्तर घटाएर कार्य गर्दछ। केहि उच्च जोखिममा परेका महिलाका लागि स्तन क्यान्सर रोक्नको लागि प्रोफिलेक्टिक रूपमा सिफारिस गर्न सकिन्छ। गोलीको रूपमा लिईन्छ, पूर्ण मूल्य तिर्ने क्रममा यो हार्मोनल केमोथेरापी अत्यन्त महँगो हुन्छ। एकलकेयर प्रयोगकर्ताहरूले केवल cash%% बचत गरेर नगद लागतको केही अंश मात्र भुक्तान गर्छन्।
प्रतिशत बचत गरियो:% 75%
रिपग्लिनाइड एक मौखिक औषधी हो जसले टाइप २ मधुमेह भएका मानिसहरूलाई रगतमा चिनी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। यसले शरीरमा ग्लुकोजको परिक्रमण कम गर्न इन्सुलिन उत्पादन उत्तेजित गर्न मद्दत गर्दछ। यो खाना खाने अघि लिइएको हो, त्यसैले धेरै पटक दैनिक — र तपाईं एक डोज मिस गर्न चाहनुहुन्न। एकलकेयर बिना, यस उपचारको लागी सयौं डलर खर्च हुन सक्छ। मूल्यमा% 75% बचत सम्मको साथ, यो धेरै अधिक किफायती छ।
En. एनोक्सापेरिन सोडियम
प्रतिशत बचत गरियो:% 74%
एनोक्सापेरिन सोडियम ( जेनेरिक Lovenox ) एक इंजेक्शन एन्टीकोआगुलेन्ट हो जुन प्राय: खुट्टा र शरीरको अन्य भागहरूमा रगतको थक्का रोक्न सिफारिस गरिन्छ। यस सूचीका धेरै औषधिहरू जस्तै, बिरामीहरूले गम्भीर उपचारको लागि एनोक्स्यापारिन प्रयोग गर्छन्, जीवन जोखिमपूर्ण अवस्था । एनोक्सापेरिन प्रायः ती व्यक्तिहरूलाई सिफारिश गरिन्छ जुन महत्वपूर्ण शल्यक्रियाबाट पुन: प्राप्ति गरिरहेका छन् वा अन्य चिकित्सा कारणहरूले पहिले नै ओछ्यानमा बाँधि रहेका छन्। अमेरिकी कार्डियोलोजी कलेज । महँगो ओभर-द-काउन्टर मूल्य ट्यागको साथ, एनोक्स्यापारिनको लागत थप अन्य सम्बन्धित चिकित्सा लागतहरू थप गर्दछ।
24 घण्टा मा ibuprofen को अधिकतम खुराक
प्रतिशत बचत गरियो:% 73%
क्लोनिडाइन एक उच्च रक्तचाप औषधी हो जुन उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा लिन मद्दत गर्दछ - एक्लो, वा अन्य सल्लाहको साथ। यसको ब्रान्ड-नाम समकक्ष, Kapvay , एक FDA- अनुमोदित गैर उत्तेजक औषधि हो ADHD लक्षणहरूको उपचार गर्न। एकलकेयर प्रयोग गर्दा, यो खुद्रा मूल्यको एक चौथाई भन्दा कम हुन सक्छ।
यूरिया , एक जेनेरिक औषधि हो जुन धेरै ब्रान्ड नाम अन्तर्गत उपलब्ध छ: यूटोपिक, अलुभिया, एक्वा केयर, अट्राक-टेन, र अन्य। यो एक्जिमा वा सोरायसिस जस्ता छालाको अवस्थाको उपचारको लागि सिफारिस गरिएको हो। यसले इन्ग्रोउन औंलाहरूबाट बिग्रिएको न nailsहरू मर्मत गर्न पनि मद्दत गर्दछ। एकल ट्यूब मूल्यवान हुन सक्छ, तर एकलकेयर प्रयोगकर्ताहरूले उपचारको लागतमा% 73% सम्म बचत गर्न सक्दछन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्वास्थ्य सेवा तपाईलाई आवश्यक पर्दाहरूको लागि अलि बढी भुक्तानी नगरी पर्याप्त महँगो छ। एकलकेयर कार्डको साथ, तपाईंसँग राम्रो महसुस गर्न मद्दत हुनेछ तपाईंलाई राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्न। साधारण रूपमा तपाईंको औषधि खोजी गर्नुहोस् singlecare.com वा एकलकेयर अनुप्रयोगमा (मा उपलब्ध App Store वा गुगल प्ले )। एकचोटि तपाईंले राम्रो मूल्य फेला पार्नुभयो भने, तपाईंको प्रिस्क्रिप्शन कुपन फार्मेसी काउन्टरमा ल्याउनुहोस्। यो सजिलो छ! तपाईले सिंगलकेयरमा भर्ने पहिलो Rx मा स्वत: अतिरिक्त $ save बचत गर्नुपर्नेछ। त्यसो भए पछि तपाईले हरेक पटक सदस्य बचत कमाउनु हुनेछ।
HDHP बनाम पीपीओ: के फरक छ?
के यो tylenol र ibuprofen मिश्रण गर्न ठीक छ?
मेरो नजिक जन्म नियन्त्रण को लागी नि: शुल्क क्लिनिक
म बीमा बिना गर्भ नियन्त्रण चक्की कहाँ पाउन सक्छु?
बजार मा सबैभन्दा कम खुराक जन्म नियन्त्रण गोली